Modely AMP ho an'ny bilaogera - Ampandehano ny Google AMP, mora izany! - MG
Modely Google AMP maimaimpoana ho an'ny Blogger.com - Torolàlana tsikelikely
Ampandehano ny Google AMP amin'ny meta fotsiny! - Ampiasao ny môdely maimaim-poana Blogger AMP misy eto raha hanome pejy AMP manaraka Google mandeha ho azy ho an'ny fametahana bilaoginao.
Manatsara ny bilaogin'ny bilaogeranao amin'ny fitaovana finday sy ny mpampiasa azy , amin'ny alàlan'izany fanatsarana ny lahatsoratrao ho an'ny fomba fampiasa Mobile First Index .
Andramo izao: ampidiro ny meta tag dia vita ianao!
Mametraka / mampihetsika ny maodely Blogger AMP
Ity torolàlana manaraka ity dia mampiseho aminao ny fomba fametrahana sy fampandehanana ny môdely AMP amin'ny bilaogin'ny bilaogeranao. Rehefa avy nampidina, ny zavatra hafa rehetra dia mandeha ho azy eo aoriany - azafady tadidio fa ny motera fikarohana dia tsy maintsy mahita aloha ary manodina ny tag meta AMPHTML amin'ny pejy tsirairay ao amin'ny bilaoginao alohan'ny hisehoan'ny kinova AMP amin'ny valin'ny fikarohana!
Midira ao amin'ny bilaogy
Midira ao amin'ny kaonty Blogger anao ary mankanesa ao amin'ny Dashboard Blogger.
Ampidiro kaody Widget AMP
Avy amin'ny dashboard Blogger, mitete amin'ireto safidy manaraka ireto:
Modely -> Amboary HTML
Ao amin'ny kaody HTML, ampio eto amin'ity faritra ity ity marika meta ity:
Mitsitsia dia vita ianao!
Tehirizo ny fanovana. Ny môdely AMP avy eo apetraka ary ampandehanana ao anaty bilaogy!
Fa maninona ity môdely AMP ity?
Ity widget / template AMP ofisialy ho an'ny mpamaham-bolongana ity, avy amin'ny amp-cloud.de, dia mampihetsika ny pejin'ny finday haingana (AMP) ao amin'ny bilaoginao - noho izany mamorona mora foana sy tsy andoavam-bola ireo mpankato Google mifanaraka amin'ny Google raha tsy misy fahalalana AMPHTML fanampiny, tsy mila fandaniana fotoana fanampiny. Andininy amin'ireo lahatsoratry ny bilaogeranao, miaraka amina tag meta HTML tokana!